ကလေးများ အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်သည့် သတိမထားမိသော အန္တရာယ်များ – XB Media Myanmar
ကလေးများ အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်သည့် သတိမထားမိသော အန္တရာယ်များ နှင့် ကာကွယ်မှုများ By Naing Ayar မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ မည်သည့်အရာအချိူ့ မည်သည့်အပြုအမူအချိူ့ ကမိမိ ၏ ရင်သွေးတွေ ရဲ့ အသက် အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင် သည် ကို မည်မျှ သိထားပြီး ပါသလဲ။ များသော အားဖြင့်တော့ ရေနွေးအိုး ဆီပူအိုး ဓါတ်ကြိုး ဖန်ခွက် အစရှိသည်တို့တော့ အများအားဖြင့် သိထားတတ်ကြသည်။ အောက်ပါ အရာများကလည်း သတိ မထားမိပါလျှင် ကလေး အသက်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်သည့် အတွက် ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါသည်။
1. ရေချိူးကန်၊ ရေပုံး၊ ငါးမွေးကန်
ရေရှိနေသော မည်သည့်ပုံး၊ ကန် မြန်မာပြည်တွင် အဖြစ်များပါသည်။ မည်မျှ ပင် ရေ နည်းသည် ဖြစ်စေ ကလေး တွေ အတွက် အသက်အန္တရာယ် ကြီးမားသည် ကလေးများ သည် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသည်။ ရေကိုထိတွေ့ရတာ ကြိုက်နှစ်သက် ကြသည်။သူတို့လေးတွေသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် မထိန်းသိမ်းနိုင်သေးသည့်အတွက် ရေနည်းသည် ဖြစ်စေ ရေတိမ်သည်ဖြစ်စေ ရေသည် အသက် အန္တရာယ် အလွန် များသည်။ မိဘများ အနေဖြင့် ရေချိူးပေးသည့် အခါပင်ဖြစ်စေ ရေဖြင့်ပေးဆော့ထားသည် အချိန်တွင်ဖြစ်စေ။ ကလေးအကြီးများ ရှိနေသည်ပင် ဖြစ်စေ လုံးဝ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံသင့်ပေ။ ခဏလေးဆိုသည် အချိန် အတိုင်းတာ သည် လည်း ကလေး အသက်ကို နှုတ်ယူ သွားနိုင်သည်။ သာဓက များ စွာ ရှိပါသည်။ မပေါ့သင့်ပါ။မိဘတွေ အနေဖြင့် ရေရှိတတ်သည့် ပုံး ရေကန် အစရှိသည်တို့ကို လည်း စိစစ်၍ ကလေး မဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ် ဖုံးပိတ် ထားသင့်သည်။ ရေအန္တရာယ် အသိကိုလည်း အကျင့်ဖြင့်အောင် ကျင့်သုံးသင့်သည်။
2. လျှပ်စစ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
ပလပ်ပေါက် ပလပ်ကြိုး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ ကို တတ်နိုင်သမျှ ကလေးဖြင့် မထိတွေ့အောင် ကာကွယ် ထားနိုင်လျင် အကောင်းဆုံးပါ။ကလေးများသည် စူးစမ်းသည်။ အထူးသဖြင့် လေးဖက်ထောက် အရွယ် လေးတွေ ပလပ်ပေါက်ကို လက်ဖြင့် ထိုးတတ်သည်။ စာရေးသူ ငယ်ငယ် ကဆိုလျင် ပလပ်ပေါက်ကို တုတ်ဖြင့် ထိုးဖူးသည်။ ရေစိုနေ၍ ဓါတ်လိုက်ဖူးသည်။ သေး ဖြင့် ပန်းဖူးသည်။ ဓါတ်လိုက်ဖူးသည်။ ကံကောင်း၍ အသက်မသေခဲ့ပေ။ပန်ကာ ဒလက်ကို လက်ဖြင့် ဖမ်း ဖူးသည်။ စာရေးသူ ညီမတစ်ယောက်ဆိုလျင် ပန်ကာထဲ ဆံပင်ဝင်သွားဖူးသည်။ထိုကဲ့သို့ အရာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျင် နားမလည်နိ်ုင်သေးသည့် အရွယ်များ အတွက် ပလပ်ပေါက်များအား တိတ်ဖြင့် ပိတ်ခြင်း။ ဓါတ်ကြိုး ပန်ကာတို့အား သတိထားခြင်း။နားလည်နိုင်သည် အရွယ်များဆို ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို အစရှိသည်တို့ ပြ၍ ရှင်း ပြခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြင့် ကာကွယ်စေချင်သည်။
3. ဗီဒို၊ စာအုပ်စင်၊ ပစ္စည်းတင်စင်
ကလေးများသည် စွန့်စား ဆော့ကစားရတာကြိုက်သည်။ စင် များသည် ကလေးများ အကြိုက် တွယ်အတတ်ဆုံးအရာများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများအပေါ် လဲကျ ကျိူးကြ အန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် မိဘများအနေဖြင့် ခိုင်ခံ့သော အောက်ခြေခိုင်သော စင်များ ပြုပြင် ဂရုပြုသင့်သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုက်ခန်း နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အထပ်မြင့်တွင်နေသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတိထားသင့်သည့် နောက်တစ်ချက်မှာ ပြတင်းပေါက် ဖြစ်သည်။ပြတင်းပေါက်နားတွင် ခုံများဖြင့် ကလေးများသည် စူးစမ်းလို၍ တတ်ကြည့်ရင်း ပြုတ်ကြသည့် အသက်အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားမှုများသည်။မိဘများအနေဖြင့် သံပန်းအမြင့်များ ပိတ်ခြင်းကာခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ထို့အတူပဲ လှေခါးခွင်သည် ကလေးများ အထူးသဖြင့် လမ်းလျောက်သင်ကာစ ကလေးများကို အန္တရာယ် ရှိစေသည်။လှေခါးခွင် ပိတ်သည့် အတားအစီးတို့ ကို ပြုလုပ်တပ်ဆင်သင့်သည်။စာရေးသူသည် မိမိ ၏ ကလေးများကို အမြင့်မကြောက်စေ ရန်တော့ အားပေးလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုခု တွယ်တတ်နေလျင် မိမိဉာဏ်ဖြင့် သင့်သည် မသင့်သည် ကို ဆုံးဖြတ်၍ ပြုပြင်သင့်လျင် ပြုပြင်သည်။ ပိတ်ပင်၍ အစားထိုးသင့်လျင် အစားထိုးလဲလှယ်သည်။ နားလည်သည့် အရွယ်များ ဖြစ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို မြင်အောင် ရှင်းပြသည်။ အစားထိုးတတ်လို့ရမည့် အရာများကို ကမ်းလှမ်းသည်။စာရေးသူအကြံဉာဏ်ပေးရမည်ဆိုလျင် အမြင့်တတ်ခြင်းကို မိဘများ အနေဖြင့် နေရာတကာ လိုက်ပိတ်ပင်ရမည်မဆိုပါ။ ကလေးများ အမြင့်ကြောက်စိတ်ဝင်၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည် အားကိုးစိတ် ပျောက်စေတတ်သည် ဟု ယုံကြည်သည့်။ ထို့ကြောင့် မိဘများ၏ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှု နှင့် အကျိူးအကြောင်း သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
4. ခန်းစီးကြိုး လိုက်ကာ ကြိုး
အမေရိကန် နိုင်ငံ စစ်တမ်းအရ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကြားတွင် ကလေးပေါင်း ၁၇၀၀၀ ခန်းစီးလိုက်ကာ ဖြင့် မတော်တဆမှု ဖြစ်ကြသည်။ ၃၀၀ကျော်သည် အသက်ရှု ကြပ်၍ သေဆုံးသွားသည်။ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ပထမ ၃ မိနစ်အတွင်း ကယ်တင်မှု မရှိလျှင် သေဆုံးသွားနိုင်သည်။ လည်ပင်းကြိုးစွပ်၍ ကြိုးမိန့်ချသည့် သေဒဏ်အပြစ်ပေး မြင်ကွင်းကို မိဘများ မြင်ကြည့်ပါ။ ဒါဆို သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ကာကွယ်ပါ။
5. ရေနွေးအိုး၊ ဆီအိုး၊ ဟင်းအိုး
ဒါကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အဖြစ်အများဆုံး သို့သော်လည်း အမှတ်မရှိဆုံးဖြစ်ရပ်ပါ။ ကလေးကတော့ ကလေးပါပဲ။ ကလေးအပြစ်မဟုတ်ပါ။မီးဖိုချောင်တွင် ဟင်းအိုး ရေနွေးအိုးတည်ထားပြီ ဆိုလျင် ကလေးကို သတိထားကို ထားသင့်ပါတယ်။ ကလေးများသည် လူကြီးများထက် လက်မြန်သည်ကို သိထားပါ။
6. အချွန်အထက် အကွဲအရှ
ဓါးအချွန် တုတ် အချွန် ခဲတံ အချွန် မည်သည့် အချွန်မျှ ပေးမဆော့သင့် သလို။ လက်လှမ်းမှီအောင်လည်းမထားသင့်ပါ။ ပေးကိုင်သည့် အခါလည်း သတိကြီးစွာထားပါ။ ပြေး၍ ချော်လဲလျင် ထိုးမိနိုင်သလို မျက်လုံး အတွက်လည်း အန္တရာယ် များသည်။စာရေးသူ၏ အကို ဖြစ်သူငယ်စဉ်က ခဲတံကိုင်၍ ကုတင်ပေါ် ကုန်းတတ်သည့် အခါတွင် မျက်လုံးသို့ ထိခိုက်မိဘူးသည့် သာဓကရှိသည်။စားပွဲ ခုံ ရှိ ထောင့် အချွန်ကအစ လိုအပ်လျင် ကပ်ထူ နှင့် တိတ်ဖြင့် ကပ်ထား သင့်သည်။ပန်းကပ် ခွက် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း ကလေးများအသုံးပြုနိုင်သော မကွဲနိုင်သော အရာများဖြင့် လဲလှယ်သင့်သည်။ကွဲမြည်စိုးရိမ်၍ လူကြီးများကပဲ ခွံ့ကျွေး ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပေ။ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ မိမိဘာသာ စားနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးသင့်သည်။
ဘယ်ပြောကောင်းမလည်း ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ဆေးလုံးတွေက သကြားလုံးပဲ။ ကလေးအားဆေးပဲ ဖြစ်နေပါစေ လုံးဝကို ကလေး လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာတွင် မထားသင့်ပါ။ ခြွင်းချက်မရှိပါ။ထို့အတူပင် သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများ ဆပ်ပြာ အစွန်းချွတ်ဆေး ခြင်ဆေး ပိုးသတ်ဆေး ကြွက်သတ်ဆေး အစရှိသည်တို့ကို လည်း လက်လမ်းမမှီရာတွင် ထား၍ ပိတ်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
8. ပစ္စည်း အသေးလေးများ၊ အစားအသောက်အသေးလေးများ၊ ပလတ်စတစ် အိတ်များ
ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိုင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် မည့်သည့် အရွယ်အစား မည်သည့် ပစ္စည်း မဆို ကလေး လက်လှမ်း မှီရနေရာ မှာ မထားပါနှင့်။အစားကျွေးလျင်လည်းသတိကြီးစွာထားပါ။ သစ်သီးအချိူ့သည် အစေ့များပါတတ်သလို။ အချိူ့ အစားအသောက်များသည် ကလေးများ ဝါး၍ မဖြစ်နိုင်သေးသည်ကို သိထားသင့်သည်။စာရေးသူ၏သမီး အမရာ တုန်းက အရေးပေါ် ကားခေါ်ရတော့မည့် အခြေအနေထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ မြေပဲပုံစံ ဂျယ်လီ လုံးကို နှားခေါက်ပေါက်ထဲထည့်၍ သူ၏ မောင်လေးကို နောက်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းထဲ ဝင်သွားတော့မှ အဖေကို လာတိုင်သည်။ နှုတ်ခမ်းများ ပင် ပြာလာပြီး မိမိသည် ပါးစပ်ကနေ လေကို မှုတ်ထုတ်မှ ထွက်သွားလေသည်။ အလွန် ကံကြီးခဲ့သည်။ပလပ်စတစ် အိတ်များကိုလည်းသတိထားပါ။ ပလပ်စတစ်အိတ်များသည် ကလေးများအတွက် ကစားစရာ လုံးဝမဟုတ်သည့် အတွက် ပေးကို မကစားသင့်ပါ။ခေါင်းကိုစွပ်၍ အသက်ရှုကြပ်နိုင်ပါသည်။ လုံးဝသတိထားပါ။ အကျင့်မလုပ်သင့်ပါ။နောက်တစ်ခုက ကလေးတွေ ကို တွေ့ကရာ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လို့ ဆိုပြီး အပြစ်မပြောပါနှင့်။ ပါးစပ်ထဲ ထည့်တဲ့ အရွယ် ပါးစပ်ထဲ ထည့်တာ သဘာဝပါ။ လိုက်မတားပါနဲ့ သူ့ရဲ့ လက်လှုပ်ရှား မှု ပါးစပ်လှုပ်ရှား မှု ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်မှု Occupational development ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လုပ်ဆောင်နေတာ ကောင်းပါသည်။ အန္တရာယ် ရှိမည့် ပစ္စည်းတွေ သာ ဖယ်ပါ။ အန္တရာယ် မရှိသော ထည့်နိုင် ကိုင်နိုင် ကိုက်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်း အရုပ်များကို အစားထိုးပါ။ သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။စာရေးသူ သမီး အမရာငယ်စဉ် က ပါးစပ်ထဲထည့်လို့ အရုပ်က အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း မသန့်ရှင်း၍ ဝမ်းလျှော ဖူးသည်။ ထိုသည်ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးဆရာဝန်တစ်ယောက်၏ အကြံပေးပုံတစ်ခုကတော့ ကလေးပါးစပ်ထဲထည့်တဲ့ အချိန်နောက်မထည့်အောင် ထည့်မယ်လုပ်တိုင်း လျှာကို ငရုတ်သီးထိပ်ဖြတ်ဖြင့် တို့ခိုင်းသည်။ အရုပ်များကို သန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့ မပြောချေ။ ထိုကဲ့ သို့ အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ အချိန်မှ စ၍ စာရေးသူသည် တခြားကလေးဆရာဝန်သာ ပြောင်းပြလိုက်သည်။ကလေးများ သူ့သဘာဝနှင့်သူရှိတတ်သည်ကို သတိပြုပါ။
ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိပ်မကျင့်သုံးသေး။ အမှန်တကယ် ပြောရမည်ဆိုလျင် လိုအပ်သည်။မြင်ယောင်ကြည့်ရအောင် သင်သည် အိပ်မောကျနေသည် မီးခိုးနဲ့ ညှော် နံ့ ကို သင် အိပ်နေသော အချိန် သိနိုင်ပါသလား။သိနိုင်သည်ထား ထို အချိန် သည် နောက်ကျနေသော်လည်းကောင်း သင်သည် မီးခိုးငွေ့ ဖြစ် အသက်သေဆုံးနေလောက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါသည် ကလေးများရှိသည့် အိမ်တွင်သာ မဟုတ်။ အိမ်တိုင်းတွင်တတ်ထားသင့်သည်။စာရေးသူသည် မီးဖိုချောင်တွေ မီးခိုးဖမ်းစက် အပြင် ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ် ဓါတ် ပါ ဖမ်းသည့် စက် တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ အပြင် အိပ်သည့် အိပ်ခန်းတွင်လည်း တစ်လုံးတပ်ထားသည်။သတိသည် ပိုသည်မရှိပါ။ မြန်မာပြည်တွင် အိပ်နေရင်း မီးလောင်လို့ မသိလိုက်ပဲ သေဆုံးသွားသည့် များစွာသော အဖြစ်ပျက်များ သင် ကြားဖူးမည်ဟု ထင်သည်။
10. ကလေးအိပ်ယာ အနေအထား
ကလေးငယ်များ အထူးသဖြင့် လသားများ ကို သတိထားသင့်သည်။ရိုးရိုးလေးပဲ စဉ်းသားကြည့်ပါ။ ကလေးသေးသေးလေးတွေ သူတို့ကိုယ် သူတို့ အသက်ရှုကြပ်နေသည် ကို သိနိုင် မည် ကာကွယ်နိုင်မည် လို့ သင်ထင်ပါသလား။ကလေးများကို တတ်နိုင်လျင် မိဘဖြင့် အိပ်ယာ တစ်ခုထဲတောင် ပေးမအိပ်ရပါ။ သီးသန့် နေရာ ပုခတ်တွင်သာ အိပ်စေသင့်သည်။ ကလေးကို ဖိမိစေနိုင်သည်။သိပ်သည့် အခါတွင်လည်း ကလေးကို ကျောခင်း၍ ပက်လက်သာ လှန် အိပ်စေရမှာဖြစ်ပြီး။ ကလေး ခေါင်းအုံးအပါး အပြား ကို သာ ခေါင်းအုံး အိပ်စေသင့်သည်။စောင် အပါးတစ်ထည်သာ ခြုံစေသင့်ပြီး မည့်သည့် အရုပ်၊ ခွခေါင်းအုံးများ မထားသင့်ပါ။ နှာခေါင်းကို ပိတ်နိင်မည့် မည်သည့် အရာမျှ မထားရပါ။မိခင်များ အနေဖြင့် နို့၊ နို့ဘူးတိုက်မည် ဆိုလျင်လည်း ထိုင်၍ တိုက်ရပါမည်။
11. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အန္တရာယ်
မော်တော်ယာဉ် ထဲရှိ ကလေးများသည် လူကြီးများထက် မတော်တဆ ဖြစ်လျှင် နာကျဉ်ထိခိုက်မှု နှုန်း ၈၀% ပိုပြင်းထန်သည်ဟု လေ့လာမှုများ တွင် တွေ့ထားပါသည်။မြန်မာနိင်ငံတွင် ကလေးအသေးလေးများကို အရှေ့ ခန်း တွင် မိဘဖြင့် ပေါင်ပေါ်တွင် ခန့်ခန့်ကြီး ပေးထိုင်တတ်ကြသည်။ကားအတူတူ မောင်းသည့် မိဘများပင် ရှိကြသည်။အလွန် မိုက်မဲသည့် လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ကလေးအငယ်လေးများ အထူးသဖြင့် လသားများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကလေးကားထိုင်ခုံ တွင် သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့်သာ ထည့်၍ စီးနင်းခွင့်ပြုရသည်။ကလေးအကြီးများဆိုရင်လည်း ကား ထိုင်ခုံ ခါးပတ်ပတ် သည့် အကျင့် ကို လေ့ကျင့်ပေးသင့်သည်။ အရပ်မမှီသော ကလေးငယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ထိုင်ခုံများ ရှိသည်။ စည်းကမ်းမလိုက်နာမှုကို မျက်နှာသာမပေးသင့်ပေ။ အန္တရာယ်ကို အခွင့်အရေးမပေးသင့်ပါ။မဖြစ်သေးရင်တော့ အကြောင်းမဟုတ်သေးချေ။စက်ဘီး စကိတ်-ကလေးများကို စက်ဘီးစကိတ်ပေးစီးသည့် အခါ ကလေးများအတွက် ခေါင်းထိခိုက်မှု ကာကွယ်သည့် ဦးထုပ်များ ဝတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
12. ဓါတ်လှေခါး စက်လှေခါး
ဓါတ်လှေခါးတတ်သည့် အခါ မည်သည့် အခါမျှ ကလေးကို အရင်ပေးဝင်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။ လူကြီးဖြင့် အတူတကွဝင်သော်လည်းကောင်း လူကြီးက တံခါးကို ကိုင်ထားခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကာကွယ်သင့်သည်။ ကလေးပါသွားနိုင်သည်။ထို့အပြင် ကလေးတွန်းလှည်းဖြင့် တံခါးကို ခံခြင်း လှမ်းဖွင့်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပေ။ ကလေးထိခိုက်သွားနိုင်သည်။စက်လှေခါးတတ်သည့် အခါတွင်လည်း ကလေးများကို မည်သည့် အခါမှ တစ်ယောက်ထဲ စီးစေခြင်း။ ဆော့စေခြင်း။ ဘေးဘက်ကို အလွန်ကပ်နေစေခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။ကလေးများကို လက်သေချာ ကိုင်ထားခြင်း ဆုံးမထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ကလေးတွန်းလှည်းဖြင့် စက်လှေခါးစီးခြင်း လုံးဝ မလုပ်ရပါ။ အထက်ပါ အန္တရာယ်များကို အသေးစိတ်သိချင်လျှင် youtube တွင် Kids escalators incident / kids elevator incident အစရှိသည်တို့ရှာကြည့်ပါ။
13. ပုံးများတွင် ဝင်ပုံးခြင်း
တူတူပုန်းတိုင်းဆိုတာ ကလေးတွေ အကြိုက်ပါ။ ကလေးများဝင်နိုင်သည့် ပုံးအကြီးများကို သတိထားပါ။အဖုံးများအား ဖွက် ထားပါ။ ကလေးများအသက်ရှုကြပ်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။အထက် ပါ အချက်များကတော့ စာရေးသူတို့ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ဥပဒေ နှင့်ပါ တင်းကြပ်ထားသည့် ကလေးသူငယ် ကာကွယ်မှု တွေကို စာရေးသူ သင်တန်းမှ ရရှိသည့် အချက်လက်အလက်များကို ဗဟုသုတရရှိစေရန် အလို့ငှာ ပြန်လည်ဝေမျှ လိုက်ပါသည်။ဗဟုသုတ ရရှိ၍ ပန်းကလေးများ ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရင်ပဲ စာရေးသူ ရေးရကျိူး နပ်ပါပြီ။ မိဘများ မိမိ၏ ရင်နှစ်သည်းချာ လေးများကို ဘေးမသီ ရန်မခပဲ ပြုစု ပျိူးထောင်းနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု လေးများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း